Mpanamboatra sy mpamatsy pyrethroid China Transfluthrin Mosquito Coil | Senton
Pyrethroid mpamono moka Transfluthrin
Anaran'ny vokatra Transfluthrin
Bika Aman 'endrika Kristaly tsy misy loko
hakitroky 1.507 g / cm3 (23 ° C)
Teboka mitsonika 32 ° C (90 ° F; 305 K)
Teboka mangotraka 135 ° C (275 ° F; 408 K) amin'ny 0.1 mmHg ~ 250 ° C amin'ny 760 mmHg
Solubility amin'ny rano 5,7 * 10−5 g / L
Transfluthrin dia a pyrethroid miasa haingana Famonoana bibikely amin'ny fikirizana ambany.Izy io dia manana ny formula molekiola C15H12Cl2F4O2.Transfluthrin dia azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana manohitra lalitra, moka, fihetsika sy kalalao.Izy io dia singa somary miovaova ary miasa toy ny fifandraisana sy ny fifohana sigara.Transfluthrin dia mahomby be ary poizina ambany bibikely pyrethroidmiaraka amina karazana hetsika misimisy. Izy io dia manana aingam-panahy mahery vaika, famonoana olona ary fanesorana ny asany. Ny hetsika dia tsara lavitra noho ny allethrin. Io dia mety hofanaraha-maso Fahasalamam-bahoaka hanimba zavatrasy ny bibikely fitahirizana entana amin'ny fomba mahomby. Manana aeffet knockdown haingana amin'ny dipteral (oh: moka) sy ny fiasa maharitra maharitra amin'ny kalalao na bibikely. Azo volavolainatoy ny coil moka, tsihy, tsihy. Noho ny etona avo ao ambanin'ny mari-pana ara-dalàna dia azo ampiasaina amin'ny fanamboarana ny Transfluthrinfamonoana bibikely vokatra ampiasaina amin'ny ivelany sy amin'ny dia.
Fomba simika C15H12Cl2F4O2
Molar faobe 371.15 g · mol-1
hakitroky 1,507 g / cm3 (23 ° C)
Solubility amin'ny rano 5.7 * 10F5 g / L
Solubility in hexane, isopropanol, toluene, dichloromethane mety levona
Fitehirizana: Voatahiry anaty trano fanatobiana maina sy misy rivotra miaraka amina fonosana voaisy tombo-kase ary lavitra ny hamandoana. Sakano tsy ho avy ny orana raha sanatria ho levona mandritra ny fitaterana.
Imidacloprid, Azamethiphos, Methoprene, Diflubenzuron Ary ny hafa koa dia azo jerena ao amin'ny orinasanay, afaka manome anao vokatra tsara izahay miaraka amin'ny vidiny mirary, raha mila ny vokatray ianao dia mifandraisa aminay
Mitady mpanamboatra sy mpamatsy famonoana bibikely ampiasaina amin'ny moka? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay hanampiana anao hamorona. Ny tontolo iainana anaty trano manohitra lalitra dia azo antoka. Izahay dia orinasa niandohan'i Sina hisorohana ireo bibikely fitahirizana hygienic. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Famonoana otrikaretina sy famonoana bibikely Amitraz
Ethofenprox famonoana bibikely matihanina 95% TC
Fanaraha-maso ny bibikely famonoana bibikely Amitraz